Tatitra momba ny fandriampahalemana…: fikambanan-jiolahy miisa 93 indray ravan’ny polisy - ewa.mg
Tatitra momba ny fandriampahalemana…: fikambanan-jiolahy miisa 93 indray ravan’ny polisy
News - Tatitra momba ny fandriampahalemana…: fikambanan-jiolahy miisa 93 indray ravan’ny polisy
Nisongadina nandritra ny tatitra
nataon’ny Praiminisitra Ntsay Christian tamin’ny fihaonana
tamin’ireo depiote ny vokatra azo momba ny tsy fandriampahalemana.
Ho an’ny polisim-pirenena, nosinganiny tamin’izany ny vokatra azo.
Teo amin’ny asan-jiolahy, fikambanan-jiolahy 93 no indray ravan’ny
polisy, trangana fakana an-keriny dimy no voarava. Eo amin’ny
halatra omby, raharaha 132 no natrehina ka tafaverina ny omby miisa
565 tamin’ireo 868 very, dahalo miisa 62 indray voasambotra. Basy
miisa 79 naverin’ny dahalo ka ny 34 naverin’ireo dahalo tao
Isandra, ny 45 tratran’ireo sampandraharahan’ny polisim-pirenena
miady amin’ny fiparitahan’ny fitaovam-piadiana.
Toy izany koa ny eo anivon’ny
zandarimariam-pirenena, tambajotran-jiolahy mpanao fakana an-keriny
sy ireo mpiray tsikombakomba no rava ka isan’izany ireo
nampihorohoro tamin’ny faritra maro toy ny tao Tsaratanana,
Mahazoarivo Isandra, Anjozorobe. Mahatratra 1 397 ireo basy
tsy ara-dalàna azo manerana ny faritra maro ka ny 106 ireo dia basy
mahery vaika avokoa niaraka tamin’ny bala miisa 428. Nohamafisin’ny
PM fa nahitana fihenany 24 isan-jato ny asan-jiolahy raha sivy
isan-ja to kosa ny fandrobana mitam-piadiana sy
fanakanan-dalana amin’ny faritra maro manerana ny Nosy. Na izany
aza, milofo hatrany ny mpitandro filaminana hamerina ny filaminana
sy ny fandriampahalemana eto amintsika.
L’article Tatitra momba ny fandriampahalemana…: fikambanan-jiolahy miisa 93 indray ravan’ny polisy a été récupéré chez Newsmada.
Raikitra ny fifampitifirana tao Soanindrariny: lavon’ny zandary ny iray tamin’ireo jiolahy mpandroba
Tsy mifidy ora anaovana asa ratsy intsony ny jiolahy. Jiolahy enin-dahy nirongo basy vita gasy iray sy zava-maranitra nanafika tokantranona mpivarotra ao Soanindrariny Antsirabe II. Tranga, niseho ny alin’ny zoma teo manodidina ny tamin’ny 11 ora latsaka fahefany. Nampihorohoro ireo mpianakavy tompona tsena ireo jiolahy ka voaroba ny entana maro, toy ny vola mitentina 4 tapitrisa Ar, ny bisikleta miisa roa, ny finday, ny lamba maro samihafa ary ny kojakoja isan-karazany. Nahatsikaritra izany ireo mpiara-monina ka nampandre ny zandary teo an-toerana. Vokany, nifanena tamin’ireo mpitandro filaminana teo am-pivoahana ny trano ireo olon-dratsy. Nitifitra avy hatrany ireo jiolahy, namaly izany koa ireo zandary ka jiolahy maty voatifitra ny jiolahy iray. « Tsy tompon-tanàna ireo jiolahy satria tsy nisy nahafantatra. Efa misy kosa ny “piste” mahakasika azy ireo », hoy ny fanazavan’ny zandary ao an-toerana.Henintsoa Hani L’article Raikitra ny fifampitifirana tao Soanindrariny: lavon’ny zandary ny iray tamin’ireo jiolahy mpandroba a été récupéré chez Newsmada.
Voasoroka ny fanafihana nokasain’ireo dahalo natao tany amin’ny faritra andrefan’i Manja, afak’omaly. Voasambotra ny lehilahy iray voalaza fa lehiben’ireo dahalo ireo niaraka tamin’ny basy iray tany aminy. Teny ambony taksiborosy hihazo an’i Morondava io lehiben’ny dahalo io no voasambotra. Niaiky izy fa lehiben’ireo dahalo ary nikasa ny hanao ny fanafihana izy ireo, araka ny fampitam-baovao avy amin’ny Pôlisim-pirenena. L’article Ravan’ny pôlisy est apparu en premier sur AoRaha.
Olona miisa 1109 avy amin’ny fokontany 03 teto amin’ny boriborintany faha-03 no nisitraka ny Vatsy Tsinjo izay ahitana : vary 50kg, menaka 02 Tavoahangy, ronono mandry 02 boaty, voamaina 2kg 500 ary CVO, Androany 01 Septambra 2020. Fizarana andiany faharoa izay nandraisan’ny avy eto amin’ny Ministeran’ny Fahasalamam-bahoaka anjara. Tonga nijery ifotony sy nanara maso ny fizotrin’ny fizarana ireto vatsy ireto ny Minisitry ny Fahasalamam-bahoaka Profesora Hanitrala Jean Louis RAKOTOVAO, niaraka tamin’ny solombavam-bahoaka voafidy teto amin’ny boriborintany faha-03. Nandritra ny lahateny izay nataony no nanehoan’Andriamatoa Minisitra ny fisaorana ireo vahoaka tonga nisitraka ireto vatsy tsinjo ireto ny amin’ny filaminana sy fanarahan’izy ireo ireo fandaminana napetraka. Hitantsika hoy Andriamatoa Minisitra fa midina ny isan’ireo tranga vaovao, « nefa tsy midika izany hoe ho vahantsika ny « gestes barrières » rehetra fa tsy maintsy hamafisintsika » Nandritra ny resaka nifanaovany tamin’ireo mpanao gazety dia naneho ny fisaorana ireo namana rehetra niara-niasa izay nahitana ny avy eo amin’ny boriborintany sy ny ekipan’ny solombavam-bahoaka Anyah ary ny mpiasan’ny fahasalamana manerana ny Nosy, Andriamatoa Minisitra. Namafisiny ihany koa fa tsy mbola mijanona ny ady fa vao maika ampitomboina ny fahazotoana, ny fitiavana. Sary sy Fanadihadiana: SCM/MSANPL’article VATSY TSINJO a été récupéré chez Ministère de la Santé Publique.
Yves Robinson: « Manintona ahy ny taotrano gasy… »
Manana ny taotrano mampiavaka azy koa Antananarivo. Tsy mbola takon’ny taotrano maoderina tanteraka izy ireny, indrindra eny amin’ny tanàna ambony. « Manintona ahy manokana ny taotrano gasy teto Antananarivo, indrindra ity teny Ambondrona ity. Lalana fandalovako matetika eo, ary tsikaritro hatrany io trano gasy mbola voatahiry amin’ny endriny taloha io”, hoy ity mpanakanto ity. Mpahay maritrano rahateo no niatombohany, avy eo fantatra teo amin’ny tontolon’ny tantara an-tsary sy ny hosodoko. Sary nalainy manokana no naveriny amin’ny hosodoko ireto harantin’i Yves Robinson ireto. Hain’ny mpanakanto tsara ny manasongadina izay tiany hisarihana ny maso, ny fo ary ny fanahin’ireo mpitsidika. NANATONTOSA: Zo ny Aina Randriatsiresy SARY: FanoL’article Yves Robinson: « Manintona ahy ny taotrano gasy… » a été récupéré chez Newsmada.
Fiainan’antoko: mitohy ny hetsiky ny VMMM
Niompana tamin’ny fandokoana ny vavahady sy ny fanadiovana ary ny fambolena voninkazo eo amin’ny CSB II Ampahimanga Ambohimanambola ny hetsika « Asa Tagnamaro » nataon’ny Vehivavy malagasy miara-miainga (VMMM), ny faran’ny herinandro teo. Efa notanterahin’ny tanora – TMMM ny fanavaozana ny lokon’ny tobim-pahasalamana. Ankoatra izany, asa sosialy efa fanao isan-taona rehefa ririnina ny famoran-jaza. Anisan’ny nisitraka izany hatrany ny eo anivon’ny distrikan’Avaradrano. Notanterahina ny herinandro lasa teo ny anjaran’ny kaominina Ambohimanambola.Nanolotra lamba ho an’ny fandriana fiterahana tao amin’ny CSBII Ambohimanambola ny VMMM. Ankoatra izany, nahazo rompatsa avy amin’ny filoha nasionalin’ny antoko Malagasy miara-miainga ireo reny mpiteraka miisa roa tao amin’ity CSB II eny an-toerana ity.Synèse R. L’article Fiainan’antoko: mitohy ny hetsiky ny VMMM a été récupéré chez Newsmada.